संसारमा मान्छेको उमेर हदै बढी भए कतिसम्म होला ? सय देखि २ सय वर्षसम्मका हुन सक्छन् । तर, हजार वर्षभन्दा पनि माथि उमेर भएको मान्छे हाम्रै नेपालमा फेला परेको सुन्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्ला । तर अच्चम मान्नु पर्दैन, उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने रुपाटार–९ का राजबहादुर राउतको उमेर १ हजार ८ सय ७४ वर्ष भएको प्रमाण नै फेला परेको छ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
उनले भने– ‘०४४ सालमा टोलीले बनाएको नागरिता हराएपछि अभिलेख गाईघाट थियो । गाईघाटबाट फ्याक्स मगाएर हतारमा काम गरेका थियौ। त्यो लेख्ने बहिनी हुनुथ्यो, निशा परियार । निशा परियारले समेत वि.सं २०० नै राखि दिनु भएछ । धेरै भीडभाड भएकाले मैले पनि हेरिन, सिधै प्रमाणित गरेर पठाइ दिए । अहिले मैले थाहा पाएँ । अव प्रशासन कार्यालय कटारी मार्फत ताप्ली गाँउपालिकामा पत्र लेखेर सम्बन्धित व्यक्तिको खोजी गरेर सच्याउँछौ । बृद्धको नागरिकतामा जन्म मिति नसच्चिनु कार्यालय प्रमुखको हैसियतले म दोषी हुँ । अव सच्चिने छ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
Previous दुवै खुट्टा नभएकि जुना आफ्नी छोरीलाई ढाडमा बोकेर काममा जान्छिन, घर पुग्दा यस्तो बिजोक ( भिडियो हेर्नुस्)
Next फेरी अस्ताए यी चम्किला तारा ! स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको कारण उनको अस्पतालको आ,इसियुमै नि,धन